ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7လိင်အကြောင်းဒဏ္ဍာရီ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 18 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများထံမှလာပဲဖြစ်ဖြစ်, မိဘများ, porn, သို့မဟုတ်ဟောလိဝုဒ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်လိင်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးခေါင်း၌မမှန်သောသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်. ကံကောင်းတာက, ကျနော်တို့အများစုရယ်စရာကောင်းတဲ့ဒဏ္ဍာရီအချို့ကို decipher ကူညီဒီမှာပါ.
လူအများအထင်လွဲ #1: သင်ကလူသားရဲ့လိင်တံကသူ့ဖိနပ်အရွယ်အစားအားဖြင့်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့တစ်ဦးကပြောပြနိုင်, ထိုစကားကိုအဝင်အဖြစ်များအတွက် “သူကြီးတွေကိုခြေရှိတယ်ဆိုရင်…”. ဒီအယူမှားဖြစ်သည်. လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်ဖိနပ်အရွယ်အစားအကြားမရှိဆက်စပ်မှုလုံးဝမရှိပါ. ဒီစလက်အရွယ်အစားနှင့်နားအရွယ်အစားအဘို့အသွား.
လူအများအထင်လွဲ #2: လိင်တံအရွယ်အစားပိုကြီး, ထိုမိန်းမသည်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှု. မှားသော, အရွယ်အစားကတကယ်တော့ကာမဂုဏ်၌မွေ့လျော်၏ပမာဏကိုနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်ကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့အတ္တနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်. G-Spot မှာယောနိအတွင်းပိုင်းနှစ်လက်မတည်ရှိပြီးထိုးနေစဉ်ကြောင့်မှုကိုလှုံ့ဆော်လိင်တံ၏ခေါင်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်. တကယ်တော့, ပိုကြီးတဲ့လိင်တံအဖန်ဖန်စကားတခွန်းကိုမျှ G-Spot misses. သီအိုရီအတွက်ဒါ, အရွယ်အစားက preferences မစိတ်ကျေနပ်မှုကိုဆင်းလာ.
လူအများအထင်လွဲ #3: အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကလေးတစ်ဦးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့သူမပြီးသားကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အခါကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူး. မှားသော, ဟုခေါ် superfetation, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အလွန်ရှားပါးသောဖြစ်ပေမယ့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တကယ်တော့သန္ဓေနိုင်.
လူအများအထင်လွဲ #4: မင်္ဂလာဆောင်သင့်လိင်ဘဝကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်. ဒီအယူမှားဖြစ်သည်. လိင်, တကယ်တော့, လက်ထပ်ပြီးနောက်တိုးတက်ကောင်းမွန်. လတ်တလောလေ့လာမှုများဇနီးမောင်နှံများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်ကျေနပ်မှုရှိသည်ညွှန်ပြ, ပိုမိုကွဲပြားခြားနားရာထူးကြိုးစား, နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံရှိသည်.
လူအများအထင်လွဲ #5: အမျိုးသမီးများ porn မကြည့်ကြဘူး. ပြန်စဉ်းစားကြည့်. အများအပြားကဝန်ခံစေခြင်းငှါ, မနေစဉ်, အမျိုးသမီးများ porn ၏ပဒေသာ watch. မကြာသေးမီကသုတေသနပြုမှုကာလအတွင်း, 85% porn ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှအားဝန်ခံခဲ့သည်အမျိုးသမီးများ. ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးများနည်းတူအများကြီးယောက်ျားအဖြစ် watch ပုံရသည်.
လူအများအထင်လွဲ #6: သင်ကရေကန်သို့မဟုတ်ပူစည်ပိုင်းအတွက်လိင်ရှိပါကကိုယ်ဝန်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. လေ့လာရေးထက်ပိုမိုပူပြင်းတဲ့စည်ပိုင်း၌ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သက်သေပြခဲ့ကြ 30 မိနစ် sperm count သုက်ပိုးအရေအတွက်ကိုလျှော့ချနိုင်; သို့သော်, အဘယ်အရာကိုမျှသုက်ပိုးကိုပယ်သတ်ပစ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုအပူချိန်သို့မဟုတ်ဓာတုသဘာဝရေ၌ရှိသေး၏. တစ်ဦးသုက်ပိုးလိင်အင်္ဂါအထဲသို့ဝင်ပြီးတာနဲ့, ၎င်း၏ရည်မှန်းချက် fertilize ရန်ကြက်ဥကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်အရာကိုမျှကရပ်တန့်မည်.
လူအများအထင်လွဲ #7: ဟောင်းကလူလိင်စရာမလိုပါ. ရောဂါဘပေမယ့်, ဇနီးတစ်ဦး၏အသေခံ, အခြားအကြောင်းတရားများတို့တွင်အဆေးဝါး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတဲ့အတားအဆီးဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, အသက်အရွယ်လိင်ကိုရပ်တန့်မထားဘူး. လိင်အသက်အရွယ်ကဆုံးဖြတ်မဟုတ်ကြောင်းလူ့အခြေအနေတစ်ခုအစဉ်အမြဲရှည်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်, ကျန်းမာခြင်း, သို့မဟုတ် functional စွမ်းရည်. တကယ်တော့, လူတွေအများစုကကောင်းကောင်းအဟောင်းအသက်အရွယ်သို့လိင်ကတက်ကြွစွာနေထိုင်. ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ပုံမှန်လိင်ကတကယ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကူညီနိုင်.
ထိပ်တန်း 10 အောင်မြင်တဲ့ချိန်းတွေ့ဘို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ